Qaramada Midoobay oo ka walaacsan dagaallada Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Qaramada Midoobay oo ka walaacsan dagaallada Muqdisho
Afhayeen u hadlay xafiiska xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay in Xoghayaha uu baaq usoo jeediyay Soomaalida, kaasoo ku aaddan dagaallada Muqdisho ka billowday.
MUQDISHO, Soomaaliya - Stephane Dujarric oo ah afhayeenka gaarka ah ee Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay in Xoghayaha Guud ee Q.M. uu ka walaacsan yahay rabshadihii u dambeeyay ee ka socday magaalada Muqdisho toddobaadyadii u dambeeyay.
Afhayeenka ayaa yiri “Xoghayaha Guud wuxuu aad uga walaacsan yahay iska hor imaadyadii hubeysnaa ee dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxa uuna mar kale ku celiyay baaqiisii hore ee ahaa in dhamaan saamilayda Soomaaliyeed ay ka joogsadaan rabshadaha iyo colaadda islamarkaasna ay ku xalliyaan khilaafaadkooda wadahadal iyo isu-tanaasul”.
Xoghayaha Guud ee Hay'adda Qaramada Midoobay Antonio Guterres wuxuu ku boorinayo dhinacyada is-haya inay si deg-deg ah ku billaabaan wada-xaajood, si loo soo af-jaro xiisadda ka aloolsan Soomaaliya.
Muranka iyo ismariwaa xoog leh oo ku saabsan doorashooyinka ayaa wuxuu sababay in ugu dambeyn Golaha Shacabka BJFS uu muddo kordhin u sameeyo dhammaan xafiisyada kala duwan ee hay'adaha dowladda ay ka kooban tahay.
Muddo kororsigaas oo ay cambaareeyeen dhammaan daneeyayaasha arrimaha Soomaalida ayey dowladda uu hoggaamiyo Madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday ee Farmaajo dhagaha ka fureysatay, waxaana taa ka dhashay in dagaallo qorsheysan lagu qaado qaar kamida xubnahii mucaaradka ugu cad-caddaa ee uu ku jiro madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.